Mmanya Nwere Ike
Mọnde 20 Juun 2022
Mmanya Nwere Ike Mepụta mmanya, ọ bụ obodo amụrụ obodo obodo a na-elebara anya nke ọma. Choo nke oma na ihe osise ọdịnala. Ebumnuche ndị bara uru chọpụtara na iji mezuo ebumnuche, nke a pụtara na ọ bụ ezie na karama mmanya okomoko dị mma mgbe ochie na-arụ ọrụ nke ọma. Motif nke eji emebe ya, arabesques.These motifs dọtara site na eserese nke Varnished Iranian Varnished. Nhazi ahụ na-anwa imepụta atụmatụ mbụ na okike ma na-agba mbọ imepụta atụmatụ nwere ihe pụtara na ya, ma buru ozi dị mkpa.
Ihe Ọ Juiceụ Juiceụ Ihe Ọ Juiceụ Juiceụ
Mbọsị Ụka 19 Juun 2022
Ihe Ọ Juiceụ Juiceụ Ihe Ọ Juiceụ Juiceụ Ihe ndabere maka echiche Pure Juice bụ ihe mmetuta obi. Ebumnuche a zụlitere na echiche ndị ahịa mebere ya na ebumnuche ndị ahịa ya, ha na-eje ozi ebumnuche ịkwụsị onye ahụ nso na shelf achọrọ ma mee ka ha bulie ya n'ọtụtụ ụdị ndị ọzọ. Ihe ngwugwu ahụ na-egosipụta nsonaazụ nke mkpụrụ osisi, usoro ndị mara mma nke a na-ebipụta na karama iko yiri nke mkpụrụ osisi. O jiri anya ya mee ka onyinyo nke ngwaahịa eke pụta ìhè.
Satọdee 18 Juun 2022
Tebụl Kọfị O sitere na ihe nlere nke geometrical nke Golden Ratio na Mangiarotti dere. Fọm ahụ na-emekọ ihe, na-enye onye ọrụ ya otu ụzọ dị iche iche. Ihe a mebere tebụl kọfị anọ dị nha dịgasị iche iche na pọkọpu toro gburugburu cube, nke bụ ihe ọkụ. Ihe dị iche iche dị n’ichebe ahụ bụ iji mezuo ihe onye ọrụ chọrọ. A na - eji ihe ndi Corian na plywood mee ihe ngosi ahu.
Fraịdee 17 Juun 2022
Ntinye Nka Pretty Little ihe na-enyocha ụwa nke nyocha ahụike na ihe osise dị omimi nke a na-ahụ n'okpuru mikroskopu, na-atụgharịghachi ihe ndị a na usoro oge a na-adịghị mma site na ọfụma nke paịlị na-enwu gbaa. N'ime ihe karịrị narị mita abụọ na iri anọ n'ogologo, na ihe osise ihe karịrị mmadụ iri anọ ọ bụ nnukwu ntinye nke na-ewetara ọhaneze nyocha nke nchọpụta.
Tọọzdee 16 Juun 2022
Nrụnye Site n'ike mmụọ nsọ site na agba ọbara ọbara, nke na-egosipụta ezigbo akụ na ọdịbendị ndị China, Reflọ ngosipụta bụ ahụmịhe oghere nke ejiri enyo enyo kee iji mepụta oghere na-enweghị njedebe. N'ime, akwụkwọ edemede na - arụ ọrụ nke ijikọ ndị na - ege ntị na ụkpụrụ ọhụụ nke Afọ Ọhụrụ nke China ma na - akpali ndị mmadụ ịtụgharị uche maka afọ dịla na afọ na - abịa n'ihu.
Wenezdee 15 Juun 2022
Mmemme Mmemme Ulo na-anabata ezumike nke ulo nke onwe ya, obu ngwakọta nke ochie na nke ohuru. Eserese nke oge 1960 na-ekpuchi mgbidi azụ, obere memento nke onwe ya gbasasịrị na ngosipụta niile. Ihe ndi a jikọtara ọnụ na njikọta ọnụ dị ka otu akụkọ, ebe ọ na -eche onye na-ekiri ya na-egosi ozi.
Mọnde 13 Juun 2022
Smartstreets-Cyclepark™ Parkinglọ Mposi Na-Agbanwe Agbanwe Satọdee 2 Julaị
Insect Sculptures Mgbasa Ozi Fraịdee 1 Julaị
Ane Stool Tọọzdee 30 Juun
Mmanya Nwere Ike Ihe Ọ Juiceụ Juiceụ Ihe Ọ Juiceụ Juiceụ Tebụl Kọfị Ntinye Nka Nrụnye Mmemme Mmemme